ကားတစ်စီးရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ABS ဘရိတ်စနစ်အကြောင်း
ရိုးရိုး ဘရိတ်စနစ်နဲ့ ABS စနစ်ဘာတွေကွာခြားလဲ?
ABS မီး ဘာကြောင့်လင်းရသလဲ?
ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီးရင် ကားလောကရဲ့ ဗဟုသုတအမှားတွေဖြစ်တဲ့
ABS ဘရိတ်စနစ်ကမကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်၊ အဲဒါဖြုတ်လို့ရမလား?
ABS ဆိုတာ Auto Braking System ကိုပြောတာလား?
ABS ဘရိတ်တပ်ထားရင် ဘရိတ်ရှူးတွေပိုစားတယ်ဆို?
ကားလမ်းကြပ်ရင် အဲဒီဘရိတ်စနစ်က မကောင်းဘူးဆို?
ABS မီးလင်းလာတာနဲ့ ဘရိတ်လုံးဝမမိတော့ဘူးဆို?
စတဲ့ နားလည်မှုလွဲ၊ အမှားတွေကို သိပ္ပံနည်းကျ နားလည်ဖြေရှင်းတတ်သွားမယ်လို့ အာမခံပါတယ်။
ABS ဘရိတ်စနစ်ဆိုတာဘာလဲ ?
ABS ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ အခုခေတ်ကားမောင်းနေတဲ့ သူတိုင်းကြားဖူးနားဝရှိကြမှာပါ။ ABS ဆိုတာက အခုကားသမားအများစုထင်နေသလို auto ဘရိတ်ဖမ်းတဲ့စနစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ABS ဆိုတာ Anti-Lock Braking System ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အတိုကောက်ယူထားတာပါ။ Anti-Lock Braking System ဆိုတာကို ဘာသာပြန်လိုက်ရင် ဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အခါ လည်နေတဲ့ဘီးတွေကို ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း မချုပ်ထားဘဲ လိုသလောက်ပဲထိန်းချုပ်တဲ့ (Anti-Lock) စနစ်လို့ မြန်မာမှုပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘီးမလည်အောင် ဘရိတ်ဖမ်းပါတယ်ဆိုမှ ဘီးလည်အောင်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ABS စနစ်ကကောင်းပါ့မလားလို့ ထင်မြင်ယူဆဖွယ်ရာတွေရှိလို့ ဘာကြောင့်ဘီးတွေကို အသေချုပ်မထားဘဲ လိုသလောက်ဖမ်းချုပ်၊ ပြန်လွှတ်၊ ပြန်ဖမ်းပေးရသလဲဆိုတာ ထပ်ရှင်းပြပါ့မယ်။
ဟိုးအရင်ကတည်းက ဘရိတ်စနစ်တွေကို ကိုးတန်းဆယ်တန်း ရူပဗေဒမှာသင်ရတဲ့ ပါစကယ်ရဲ့နိယာမ (Pascal 's Law) P = F/A ဆိုတာကို အခြေခံပြီး အရည်ဖိအားသုံး ဘရိတ် (hydraulic brake) နည်းတွေနဲ့တီထွင်အသုံးပြုပါတယ်။
အဲဒီနည်းတွေက ရိုးရိုးဘရိတ်စနစ်တွေဖြစ်ပြီး လည်နေတဲ့ ဘီးတွေအကုန်လုံးကို ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်းအသေဖမ်းချုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့ (Lock) စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အရှိန်များများနဲ့ရွေ့လျားနေတဲ့ကားရဲ့ဘီးတွေကို အသေဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ရွှေ့လျားနေသော အရာဝတ္ထုသည်ဆက်လက်ရွှေ့လျားခြင်း (Law of Inertia ) ဆိုတဲ့ အင်နာရှားသဘောတရားအရ ဘီးတွေအကုန်ချုပ်ကိုင်နိုင်ပေမယ့် ရွှေ့လျားနေတဲ့ကားရဲ့ ဘော်ဒီတခုလုံးက အရှိန်နဲ့ဆက်လက်ရွှေ့လျားကာ ကားက သင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်ထွက် တရွတ်တိုက်ဆွဲသွားပြီး တိုက်ချင်တဲ့ဆီကိုဝင်တိုက်၊ ချော်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ချော်ထွက် စတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ accident တွေဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုအဖြစ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် ဘီးတွေကို အသေ မထိန်းချုပ်ဘဲ ဘရိတ်ဖမ်းတဲ့အချိန်ကားကို လိုသလိုကွေ့နိုင်၊ ခေါက်နိုင်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ABS စနစ်ဆိုတာကို တီထွင်ခဲ့ကြတာပါ။
ABS စနစ်မှာ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်နေတာတွေကတော့ wheel speed sensors (ဘီးလည်ပတ်မှု အာရုံခံစနစ်) ၊ valve ၊ HCU (hydraulic control unit) ၊ ECU (electronic control unit ) တို့ပါ။
ကားတစ်စီးအရှိန်နဲ့မောင်းနေတဲ့အချိန် ABS စနစ်သုံး ဘရိတ်တစ်ခုနဲ့ ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင် ဘီးမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အာရုံခံစနစ်တွေကနေ ဘီးဘယ်လောက်အရှိန်နဲ့လည်ပတ်နေသလဲ၊ ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်ချိန်ဘယ်လောက်အရှိန်လျော့သွားသလဲဆိုတာကို ECU ကိုသွားသတင်းပို့ပါတယ်။
ECU ကနေတစ်ဆင့်ရထားတဲ့ ဒေတာတွေကို HCU ကနေတစ်ဆင့်စေခိုင်းပြီး အဲ့ဒီကနေမှ ဘရိတ်ဖမ်းဖို့ဘယ်လောက် ဖိအားပေးသင့်တယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်ပါတယ်။ ပြီးမှ solenoid valve တွေကနေတစ်ဆင့် ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်တဲ့ ဖိအားကို ရပ်တန့်ပေးတာ၊ လျော့ချပေးတာ၊ တိုးပေးတာတွေလုပ်ပြီး ဘရိတ်ကို ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖမ်းချုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာ တစ်စက္ကန့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးမှာပဲ တွက်ချက်အလုပ် လုပ်သွားတာမျိုးပါ။
ABS စနစ်ရဲ့ အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲ?
ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဲ စတီယာရင်ကို လိုသလိုထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်တယ်။ ဘီးတွေကို အသေချုပ်ကိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ လိုသလောက်ပဲ ထိန်းချုပ်တာမလို့ ကားက စလစ်ဖြစ် ချော်ထွက်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်တယ်။
အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းနေချိန် ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်လို့ မိသွားရင်လည်း ကားက ပုံမှန်အနေအထားအတိုင်းတည်ငြိမ်တယ်။
ရိုးရိုးဘရိတ်စနစ်တွေထက် ဘရိတ်မိတဲ့အကွာအဝေးတိုတာမလို့ ပိုပြီးအန္တရာယ်ကင်းတယ်။ အကွေ့တွေမှာ ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်ရင် တဖက်ကိုစောင်းပြီ ချော်ထွက်သွားတာမျိုးကနေလည်း အကာကွယ်ပေးတယ်။ လမ်းမညီမညာဖြစ်နေတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဖမ်းလိုက်ရင်လည်း ဘီးတစ်ခုခြင်းစီရဲ့လည်ပတ်နှုန်းကို အာရုံခံထားတာမလို့ လမ်းကနေချော်ထွက်သွားတာမျိုးကနေ အကာအကွယ်ပေးတယ်။ ကြမ်းတမ်းနေတဲ့လမ်းအနေအထား၊ ရေတို့၊ ချောဆီတို့ရှိနေတဲ့လမ်းအနေအထားမျိုးတွေမှာ ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်ရင်လည်း ABS စနစ်ကြောင့် ချော်ထွက်ခြင်းမှကင်းဝေးစေပါတယ်။
ABS မီးလင်းရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ wheel speed sensors (ဘီးလည်ပတ်မှု အာရုံခံစနစ်) ၊ valve ၊ HCU (hydraulic control unit) ၊ ECU (electronic control unit) တို့တစ်ခုခုချို့ယွင်းပျက်စီးခဲ့မယ်ဆိုရင် ABS မီးလင်းလာပါမယ်။ အဓိကအားဖြင့် အဖြစ်များဆုံးကတော့ wheel speed sensors (ဘီးလည်ပတ်မှု အာရုံခံစနစ်) ကနေအဖြစ်များပါတယ်။ ရေထဲမောင်းပြီး ရေစိုသွားရင်လည်း အာရုံခံစနစ်တွေကြောင်ပြီး ABS မီးလင်းလာတတ်ပါတယ်။
သံကြေးတက်သွားတာမျိုး၊ ဘရိတ်ပြုပြင်ရင်း မတော်တဆထိခိုက်မိတာမျိုး၊ wheel speed sensors တွေပြန်မတပ်မိတာမျိုးတွေကလည်း ABS မီးလင်းလာတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကားတွေမှာ နောက်
ဘရိတ်မီးသီးကျွမ်းနေတာကနေလည်း ABS မီး သွားလင်းနေတတ်ပါတယ်။ Brake pad တွေကုန်နေရင်လည်း ABS မီးလာလင်းတာမျိုးတွေ တစ်ချို့ကားတွေမှာဖြစ်တတ်ပြီး၊ တစ်ချို့မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာတော့ brake pad ကုန်နေတာကို warning light သီးသန့်ဖော်ပြပေးပါတယ်။
ABS မီးလင်းလာရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?
ABS မီးက ပုံမှန်အားဖြင့် ကားသော့ဖွင့်လိုက်ရင် လင်းနေမှာဖြစ်ပြီး၊ စက်နှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ ပြန်မှိတ်သွားရမှာပါ။ မဟုတ်ဘဲ ဆက်လင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ABS system တစ်ခုခုချို့ယွင်းနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သင့်ကားမှာ ရိုးရိုးဘရိတ်စနစ်ကတော့အလုပ်လုပ်နေဆဲပါ။ ABS မီးတစ်ခုတည်းလင်းနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ ကားရဲ့ဘရိတ်ခြေနင်းအပေါ်မှာ အားဘယ်လိုသက်ရောက်သေးလဲ၊ ဘရိတ်လျော့ကျသွားလား၊ ဘရိတ်ချော်နေပြီလား ဆိုတာမျိုးကို သတိထားစမ်းသပ်ပြီး ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့မှာစစ်ဆေးပြုပြင်ရမှာပါ။
Brake warning light ပေါ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အခြေခံဘရိတ်မီးလင်းလာတာ (ABS မီးနဲ့မတူပါဘူး အောက်မှာပြထားပါတယ်) မျိုးကတော့ parking brake (ဟန်းဘရိတ်ဆွဲထားတာ)၊ master cylinder fluid reservoir (ဘရိတ်အပေါ်ဆုံ ) မှာဘရိတ်ဆီနည်းနေတာ၊ ဘရိတ်ဆလင်ဒါတွေက ဝါရှာတွေပေါက်နေတာ၊ ဘရိတ်ရှူးတွေပါးနေတာ၊ ဘရိတ်ဆီလိုင်းတွေပေါက်နေတာတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်တာကတော့ ဟန်းဘရိတ်ကြီးဆွဲထားမိသလား ပြန်စစ်ပါ။ ဆွဲထားမိရင် ဟန်းဘရိတ်ပြန်ချပါ။ အပေါ်ဆုံမှာ ဘရိတ်ဆီနည်းနေသလားပြန်စစ်ပါ။ နည်းနေရင် max အမှတ်ရောက်အောင် ဖြည့်ပေးပါ၊ ကားစက်သတ်ပြီး တစ်ဖန် ကားစက်ပြန်နှိုးကြည့်ပါ။ မပျောက်သေးရင် ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့ကို ပြသစစ်ဆေးဖို့လိုနေပါပြီ။
တစ်ချို့ကားတွေမှာ brake warning light ကိုပဲ အဝါရောင်နဲ့ အနီရောင်နှစ်မျိုးခွဲထားပြီး အဝါရောင်က သင့်ရဲ့ ဘရိတ်စနစ်မကြာခင်ချို့ယွင်းတော့မယ်ဆိုတာမျိုးကို ဖော်ပြတာဖြစ်ပြီး၊ အနီရောင်ကတော့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ ချက်ခြင်းလိုအပ်နေပြီဆိုတာကို ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
ABS မီးရော normal brake warning light ရောပေါ်နေတယ်ဆိုရင်?
ဒါဆိုရင်တော့သင့်ကားရဲ့ ဘရိတ်စနစ်တစ်ခုလုံး ချို့ယွင်းပျက်စီးနေပါပြီ။ အရမ်းအန္တရာယ်ကြီးတာကြောင့် မောင်းနှင်ဖို့မသင့်တော့ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဆွဲကားနဲ့ဆွဲပြီး ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာ သွားရောက်ပြုပြင်သင့်နေပါပြီလို့ အကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အခြားမျိုးတူ မူခြား ဘရိတ်နည်းပညာတွေလည်း ရှိသေးပေမယ့် အခုလောက်ဆိုရင်တော့ ABS စနစ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ဗဟုသုတ အခြေခံတွေသိလောက်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ တစ်ချို့ကားတွေမှာ brake pad (ဘရိတ်ရှူးကုန်တာမျိုး)၊ parking brake (ဟန်းဘရိတ်) ဆွဲထားတာမျိုးတွေကို သီးသန့်အချက်ပြမီးတွေပြတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဘရိတ်နည်းပညာတွေဘယ်လိုပဲကောင်းကောင်း မဆင်မခြင်နဲ့ over speed မောင်းနှင်ခြင်းက သင်နဲ့ သင့်ကားကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေမှာမလို့ အသိ၊ သတိနဲ့ ဆင်ခြင်ကြပါလို့ စေတနာထားတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေအပေါင်း နည်းပညာဗဟုသုတများကြွယ်ဝပြီး အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာက ကျွမ်းကျင်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ ၂ဝ၁၉ အကောင်းဆုံး SUVs တွေ